Taariikhda My Butros » Talooyin Si aad u noqoto Chick Magnet ah
Talooyin Si aad u noqoto Chick Magnet ah
Last updated: Sep. 23 2020 | 2 min akhri
Sidee baad u soo jiidan naagtii reer riyooyinkiinna aad? Inkasta oo ay u qaadan kartaa guys ugu waqti dheer ka buuxsamay tijaabooyin iyo khaladaadka, ayaa sameeyay liiska talooyin aan si aad u noqon karaan magnet ubad ah oo aad u heshid xaaskiisa mustaqbalka.
Tip #1: Diidmada ma aha had iyo jeer diidmo run
Ka soo qaad in aad la kulanto qof dumar ah oo qurux badan, wada hadal ku dhufan ilaa markaas aad u ogaato ayay leedahay saaxiib. Iyadoo guys ugu qaadan doonaa in sida calaamad u noqon waayeen oo ka tago, run ahaantii ma aha in aad. Tani ma aha calaamad diidmo midna waa tilmaame in iyadu ma xiiseynayo. Haddii wada hadalka si habsami biyaa la qoslo oo dhoolo-, qaataan kuwa sida calaamadahaaga. Nin run ahaantii waxa uu guuleysto tahay ee soo jiita dumarka waa dhab iyo ogyahay haweenka fiican yahay marka uu iyada u arkaa. Just maxaa yeelay, iyadu haatan waa diyaar aheyn macnaheedu ma aha in aad marnaba fursad u heli doontaa. Tani waa fursad inuu ahaado qoyskaaga waxaa iyada u. Qaar ka mid ah xidhiidhka iyo guurka ugu wanaagsan bilaabi marayo saaxiibtinimada.
Tip #2: Istaag Out
Taagan oo ka soo baxay dadkii badnaa waa muhiim in goobta shukaansi ah. Waxaa jira guys badan isagoo hadalkii oo kale oo ku baaqaya, si la mid ah sidii aad. Haddaba sidee baad u taagan? Kaalay guud ahaan kalsooni ku, ma cocky. Noqo dhab ah iyo ogaato danaha iyo hiwaayadaha aad labada share in. Iyo ugu dambayntiina, si gaar ah naftaada. Haddii ay jeedaa in uu noqdo, isagoo aad u soo jiidan doonaa naagtii waxay xaq u.
Tip #3: Samee Connection ah
Ogolaanshaha wax kasta oo u timaada oo ka mid dumar ah ee afka oo ay weheliyaan heshiis oo dhan iyada aragtida iyo fursadaha jidka loo badiyeen naag ma aha. Dumarka waxaa marnaba raadinaya nin oo raacsan wax walba ayay tiri. Waxaan jecel nahay oo caqabad ku ah. Doodaan aragtiyo kala duwan, fikradaha, danaha, iyo damacyadii caawisaa si ay u sameeyaan xiriir qoto dheer. Qof dumar ah oo loogu talagalay xiriir daacad ah ula nin raadinaya.
Tip #4: Xoog
Haweenka ku Dadaashid saaxiibkiisa ah waa xoog badan oo qabta jago sare labada dareen ahaan iyo maskax ahaan. Iyadoo guys qaar dareemaan sida haddii aadan ay soo jiidan kara qof dumar ah, maxaa yeelay, iyagu ma ay haysan lacag, shaqo weyn, ama xaalad bulsho sare, in aan run ahayn. Haweenka ayaa soo jiitay in nin akhlaaqdiisa xoog iyo kuwa ogyahay waxa uu rabo. Laakiin ma misconstrue xoog this. Waayo, nin haysta xoog run ma uu cabsan in uu kooxda xasaasi ah oo ka taataabtay.
Tip #5: Deal ee Xir
Dadka intooda dhicin zone saaxiib ah sida iyagu ma ay yaqaaniin sida loo xirto heshiiska. Haddii aan soo xaraystay heshiiska, aad ugu dhakhsaha badan la ogaan doonaa sida saaxiib ah daryeel iyo jacayl nin, iyo nasiib xaaladda tani waxay noqon doontaa adag tahay in laga takhaluso. Guys ka heli kartaa kooxda dabagal iyo seegi fursad ugu fiican in la sameeyo qof dumar ah oo kooda si fudud sababtoo ah ma u ogaato wixii aad samayn. In aad wax yar dagaal badan oo ay weheliyaan Bibi ee ku saabsan calaamadaha muhiimka ah ee haweenka diro kaa caawin doonaa in ay xirto heshiiska.
By hanashada naseexooyinka kor ku xusan, hubaal waxaad noqon doontaa markaad hayso wadada naagtii reer riyooyinkiinna aad jiidanaya.
7 Xaqiiqada ku saabsan Butros Lovers